Uncategorized | greenbox
November 20, 2009 at 6:38 am | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
နံနက် ရှစ်နာရီခန့် ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတွင် အဖေရုံးမသွားမှီ၊ အမေဈေးမသွားမှီ၊ ကျွန်တော်ကျောင်း မသွားမှီ နံနက်စာစားရင်း ကျွန်တော့်အိပ်မက်တွေအကြောင်းကို ပြောပြလေ့ရှိသည်။ ငယ်စဉ်ကတည်း က ယခု အသက် (၁၆) နှစ်တိုင်အောင် ပုံမှန်လုပ်နေကြအလုပ်များထဲတွင် ကျွန်တော့် အိပ်မက်၊ စိတ်ကူးများကို ဖွင့်ဟခြင်းလည်းပါဝင်သည်။
ထိုသို့ ကျွန်တော်ပြောပြီးတိုင်း၊ ကျွန်တော်သိချင်သော မေးခွန်းများကို အဖေက မေးခွန်းများဖြင့်သာ ပြန်ဖြေလေ့ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက မေးခွန်းများ မေးတတ်အောင်၊ မေးခွန်းများနှင့်ရင်းနှီးအောင် သင်ပေးလေ့ရှိသည်။ အဖေပြောသော စကားတစ်ခွန်းရှိသည်။
-သား၊ နယူတန်က ဘာ့ကြောင့်အမ္ဘာ့ဆွဲအားကို သိတာလဲ-
-ပန်းသီးကြွေတာ မြင်လို့ပေါ့ အဖေရ-
-ပန်းသီးကြွေတာမြင် တဲ့လူအများကြီးမှာမှ သူကဘာကြောင့် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားနိယာမကို ဖော်ထုတ်နိုင် တာလဲဆိုတာ သားစဉ်းစားမိရဲ့လား-
ကျွန်တော် အဖေပြောမှ စဉ်းစားမိသည်။ ထိုအချိန်က နယူတန်၏ ခေါင်းထဲတွင် ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားနှင့် ပက်သက်သော မေးခွန်းပေါင်းများစွာ ရှိနေပေလိမ့််မည်။ ထိုမေးခွန်းများအတွက် သူအရာရာကို ကြည့်မြင်တိုင်း လူအများနည်းတူ အပေါ်ယံမကြည့်၊ အတွင်းထဲသို့ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် တွေးနိုင် ကြည့်နိုင်၍သာ ကမ္ဘာ့ဆွဲငင်အားနိယာမ တရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော
-သားသိပြီဖေဖေ၊ သူမှာ နဂိုကတည်းက မေးခွန်းတွေခေါင်းထဲရှိနေပြီးသားမို့လို့ပေါ့-
-ဒါပေါ့သားရယ် ပင်နီစလင်ကို တွေ့ခဲ့တာလည်း ဒီတိုင်းပဲပေါ့သားရယ်-
-အဖြေဆိုတာ သူများရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသားတွေပဲ၊ သားအဖြေတွေကိုသိဖို့လိုအပ်သလို၊ အဲဒီအဖြေတွေ ပေါ်မှာထပ်ဆင့်မေးခွန်းထုတ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့လိုတယ်သား-
-ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောသလဲဆိုတော့၊ အဖြေတစ်ခုဟာ အခြေအနေတစ်ခုမှာ မှန်နေနိုင်ပေမဲ့၊ အခြား အခြေအနေတစ်ခုကို ရောက်တဲ့အခါလွဲသွားနိုင်တယ်။ သိနေပြီးသော အဖြေတစ်ခုကို ဒါမှမဟုတ် အမှန်တရားတစ်ခုကိုလည်း အသေကိုင်စွဲမထားမိဖို့က လည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်သား-
-အခုအဖေပြောတာတွေကလည်း အဖေ့ဘ၀အတွေ့အကြုံအရ သိလာတာလေးတွေကို ဖောက်သည် ချတာ၊ သားကိုယ်တိုင်မှန်လားမှာလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်ကြည့်၊ ဟုတ်ပြီလား-
အခုလို မေးခွန်းတွေမေးတတ်အောင် လမ်းညွန်ပေးခဲ့တဲ့ အဖေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က ဒီလောကကြီးကို အပြီးအပိုင်ခွဲခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ ခုတော့ အရမ်းဆန်းကြယ်ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ ကျွန်တော်မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းတွေကပဲ ကျွန်တော်ကို လမ်းညွန်ပေး ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်မေးခွန်းတွေကို ဆက်မေးနေပါအုံးမယ်လို့လည်း အဖေ့ကို စိတ်ထဲကနေ ကတိပေးနေမိပါတယ်။
November 3, 2009 at 2:52 pm | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
ကျွန်တော်ကတော့ အတ္တကို ဆေးသကြားခဲနှင့် နှိုင်းချင်ပါသည်။ ဆေးသကြားကို လိုအပ်သလောက်ပဲသုံးမည်ဆိုလျှင် ထိုအစားအ
သောက်က စားလို့ကောင်းပါသည်။ သူ့ချည်း သက်သက်ဆိုရင်တော့ ခါးပါသည်။ များလွန်းလျှင်ခါးမည်။ လုံးဝမသုံးလို့တော့မရ။ အဘယ်
ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်တို့ လူ့လောက၊ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် ကျင်လည်ကြရသည့် ပုထုဇဉ် လူသားများ ဖြစ်သောကြောင့် အတ္တနှင့်
ကင်းမည်မဟုတ်။ ဆရာကျော်ဝင်းဘာသာပြန်သည့်7 Habits မူရင်းစာရေးဆရာSEAN COVEYရေး
သားသော စာအုပ်လေးမှာ ပါသည့် ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို ပြောပြချင်ပါသည်။ မူရင်စာရေးသူ SEAN COVEY ကိုယ်တိုင်
ကလည်း ဘရုစ်ဘာတန် ၏ (THE MAN NOBODY KNOWS) ဆိုသည့် စာအုပ်ထဲမှ ထုတ်နုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ပါလက်စတိုင်းဒေသတွင် ပင်လယ်နှစ်စင်းရှိပါသည်။ တစ်ခုသော ပင်လယ်တွင် အေးမြကြည်လင်သော ရေအယဉ် ရှိ၏။ စိမ်းစိုလန်းဆန်းသော ကမ်းနဖူး ရှိ၏။ ငါးမျိုးစုံတို့ရှင်သန် ကျက်စား ရာဖြစ်သလို၊ ကမ်းစပ်သစ်ပင်အားလုံး၏ ရေကြည်ပေးရာအေးမြကန်
သာ ဖြစ်ပါ၏။ လူတို့က ဤပင်လယ်ကို နှစ်လိုဖွယ်ရှိသောပင်လယ် (THE SEA OF CALILIE) ဟုခေါ်ကြသည်။
တစ်ခုသော ပင်လယ်တွင်မူ ညိုညစ်သော ရေပြင်အတိ ပြီး၏။ ခြောက်သယောင်းသော ကမ်းပါးတို့ဖြင့် ၀န်းရံ၏။လေပြည်မညင်း၊ ငါး
တို့မပျော်၊ သတ္တ၀ါအပေါင်းတို့ ရှောင်ကွင်းခြင်းပြုကြ၏။ လူတို့က ဤပင်လယ်ကို မရဏပင်လယ် (DEAD SEA) ဟုခေါ်ကြသည်။
ဂျော်ဒန်မြစ်ရေသည် အဆိုပါပင်လယ်နှစ်ခုသို့အညီအမျှစီးဝင်ပါသည်။ သို့နှင့်တိုင်ပင်လယ်နှစ်ခုမှာခြားနားလွန်းနေပါ၏။ အသို့နည်း။
နှစ်လိုဖွယ်ပင်လယ် ကမြစ်ရေကို လက်ခံသည်နှင့်အမျှ ပြန်ထုတ်ပေးသည်။ အ၀င်နှင့် အထွက်ညီမျှနေရာ ထာဝစဉ် စီး
ဆင်းနေပြီး ကြည်လင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မရဏပင်လယ်ကမူမြစ်ရေကိုလက်ခံရုံသာရှိပြီးပြန်လည်မဝေမျှ။ တွန့်တိုစွာ သိမ်းဆည်းထား
သည်။ သို့ဖြင့် ရေသေတို့ သဘာဝအတိုင်း မှုံမှိုင်းအုံ့ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သင်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မည်ဆိုလျှင် မည်သို့သော ပင်လယ်ဖြစ်လိုပါသနည်း။
ကျွန်တော်တို့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာလည်း မရဏပင်လယ်လို လူများစွာကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အ၀င်ပဲလက်ခံသည် အထွက်မရှိ။ အယူပဲ
ရှိသည်၊ အပေးမရှိ။ တချို့တွေကတော့ ဆင်ခြေပေးချင်ပါသည်။ ကိုယ်ကပြည့်မှ သူများကို ဖြည့်လို့မယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်ကပြည့်မှ
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လူသားများ၏ လိုအင်ဆန္ဒများသည် အဆုံးရှိသလားဟု မေးချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့လိုအင်ဆန္ဒများသည် အ
ဆုံးမရှိပါ။ ဒါလေးမရခင်က ဒါလေးရရင်တော်ပြီဟုပြောသည်။ ဒါလေးလဲရရော ဟိုဟာလေးပါရရင်ပိုအဆင်ပြေမည်ဟု တွေးကြပြန်
သည်။ ရယူလိုက်လို့ ပျော်ရွင်သည့် အပျော်နှင့် ပေးဆပ်လိုက်လို့ ရသည့် ပီတီကပိုချိုမြိန်ပါသည်။ ဒါကိုဆရာဖေမြင့်၏ နှလုံးသားအ
ဟာရစာအုပ်ထဲတွင် ဖတ်လိုက်ရသော အကြောင်းအရာလေး တစ်ခုကို ဖောက်သည်ချချင်ပါသေးသည်။ သိပ်အတိ အကျတော့ မမှတ်
အထက်တန်းကျောင်းအတူတူ တက်နေသော သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရှိပါသည်။ တစ်ယောက်ကချမ်းသာသည်။ တယောက်က
ဆင်းရဲသည်။ တနေ့ ဆင်းရဲသော သူငယ်ချင်းထံသို့ ချမ်းသာသော သူငယ်ချင်း ကား အသစ်တစ်စီးကို မောင်း၍ ရောက်လာသည်။
သူတို့ ကားအတူတူ စီး၍ မြို့အနှံ့လျှောက် မောင်းကြသည်။ ဆင်းရဲသားကောင်လေးက ကားလျှောက်မောင်းသည့် တလျောက်လုံး
တွေးတော၊ မှိုင်တွေ၍ လိုက်လာသည်။ ချမ်းသာသော ကောင်လေးက ဘာလဲ မင်းဒီလိုကားမျိုးလိုချင်လို့လား ဟုမေးသည်။
ထိုအခါ ဆင်းရဲသားကောင်လေးကဤသို့ပြန်ဖြေလိုက်သည် မဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ငါညီလေးကို ဒီလိုကားမျိုးဝယ်ပေးချင်လို့တွေးနေတာ
ပါ၊ ငါညီလေးသာ ဒီလိုကားမျိုးရရင် တော်တော်ပျော်မှာ ဟုပြုံးပြီးတော့ ပြောလိုက်သည်။
ကိုယ့်မိဘအတွက်၊ ကိုယ့်မောင်နှမတွေအတွက်၊ ကိုယ်အသိုင်းအ၀ိုင်းအတွက်၊ ကိုယ့်ရပ်ကွက်အတွက်၊ နောက်ဆုံး ကိုယ်ကမ္ဘာကြီး
အတွက် ဆိုပြီး ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မထားပဲ အလုပ်တစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ပါ။ ကိုယ်လုပ်တာလူအများကြီးသိဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
ကိုယ်လုပ်သော အလုပ်အတွက် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။ ကိုယ့်လုပ်တာ ကိုယ်သိဖို့ နှင့် ကိုယ် စိတ်ကိုယ်သန့်ဖို့ပဲ
လိုအပ်ပါသည်။ သင်မျှော်လင့်ချက်မထားပေမဲ့ သင်မမျှော်လင့်သော အရာများ သင့်ဆီဆိုက်ရောက်လာပါလိမ့်မည်။
ဤစာကိုဖတ်ပြီး ပေးဆပ်တတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် အခုပဲစပြီးလုပ်ဆောင်မည်ဟု စိတ်ကူးလေးတစ်ချက်ရလျှင်ပင် စာ
ကျွန်တော်ရေးသည့် အကြောင်းအရာကို ကြားဖူးသည့် လူများလည်းရှိပါမည်။ မသိသေးသောသူများလည်းရှိပါလိမ်မည်။ မည်သို့ပင်
ဆိုစေ စိတ်ကြိုက်ကွန်မန့်ပေးနိုင်ပါသည်။ ညစ်ညမ်း စာသားများမှလွဲ၍
October 8, 2009 at 4:41 am | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
ဘ၀မှာ အကြိမ်ကြိမ်မှားယွင်းခဲ့ သမျှတွေကို ခံစားဖို့ အတွက် ရောက်ရှိလာတဲ့ နောင်တဆိုတာကို မသိသလိုနေလိုက်တာ ရက်၊ လ၊ နှစ်တွေ
ကြာပြီပေါ့………..တကယ်ကို ကို နောက်တဆိုတာ မုန်းတီးခဲ့တာပါ……..အခုတော့ ကျွန်တော် ပထမဆုံးအကြိမ် နောင်တဆိုတာကို ထွေးပိုက်
မိပါတယ်…………မျှော်လင့် မထားပေမဲ့ ဒီလောက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လာလိမ့်မယ်လို့တော့ ဘယ်တုန်းက မှမျှော်လင့်မထားမိတာ အမှန်ပဲ……..
သာမာန်မဟုတ်သော G Talk ဇတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
October 2, 2009 at 10:47 am | Posted in Uncategorized | 1 Comment
၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်
အလုပ်ပိတ်ရက် Sunday နံနက်ခင်းအားလပ်နေသဖြင့် နံနက်စာစားပြီးနောက် Internet ဆိုင်သို့ခြေဆန့်ခဲ့ပါ
သည်။ထုံးစံအတိုင်း Mail စစ်၊Facebook သုံး၊Blog လေးနည်းနည်းပါးပါးရေးနှင့် အချိန်ဖြုန်းနေလိုက်သည်။
Gtalk ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်နှင့်သိတဲ့သူတစ်ယောက်မှမရှိ။ထိုနေရာ၌ ကျွန်တော့်၏ အကျင့်တစ်ခု
ကိုပြောပြရန်လိုသည်။ကျွန်တော့်ကို Invite လုပ်ရင် မည်သူဖြစ်ဖြစ်လက်ခံလိုက်ပြီး အသိဖြစ်လျှင် စကားပြော
၍ မသိသူဆိုလျှင် Hi,How r u လောက်နှင့်ပြီး၍ စကားဆက်ကပြောဖြစ်သည်ကများသည်။ကြာလာတော့သူ့
ဖက်ကလည်း စကားမပြော ကိုယ့်ဖက်ကလည်းပြန်မပြာနှင့် online မှာလူတွေအများကြီးရှိလျှက် စကားပြော
မည့်သူမရှိဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်။အခုတော့ ပျင်းပျင်းရှိသည်နှင့်မည်သူနှင့် ချက်ရင်ကောင်းမလဲဟု နာမည်တွေ
ပြားပြားတွေထဲမှ cheery89@gamil.com ဆိုသည့် ရိုးရှင်းသောနာမည်လေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ကျွန်
တော်လည်းထို account ပိုင်ရှင်လေးနှင့်ပင်ချက်မည်ဟုစဉ်းစားလိုက်ပြီး ကိုယ်ကပဲ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါ
(ကျွန်တော် Gtalk နှင့်ချက်လျှင်မြန်မာလိုသာချက်လေရှိသည်။Myanglish လိုလည်းနားမည်၊ဖတ်လည်းမဖတ်
တတ်၊English လိုလည်းမကျွမ်းကျွင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။)
သူ့ဖက်ကလည်းမြန်မာလိုသာပြန်ချက်၍ တော်သေးသည်ဟုဆိုရသော်လည်း ဘုဂလန့် ပြန်ချက်ခြင်းဖြစ်သည်။
C	“မင်္ဂလာပါဆိုလို့ ရှင်ကဧည့်ကြိုလားလို့မေးတာ”
C	“ဒါဆိုဘာလို့ မင်္ဂလာပါလို့ပြောလည်း”
B	“ကိုယ်နဲ့ မသိတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်ရတာမင်္ဂလာပေါ့ဗျ”
C	“မိတ်ဆွေဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူကပြောလို့လဲ၊မိတ်ဆွေဖြစ်တိုင်းရော မင်္ဂလာရှိရောလား”
B	“ဟာဗျာ….လမ်းမှာပခုံးချင်းတိုက်မိတဲ့လူနှစ်ယောက်တောင်မှ ဒီလိုစကားပြောဖို့အခွင့်အရေးရှိ
မဟုတ်ဘူး၊ကျွန်တော်တို့ ဒီလိုစကားပြောခွင့်ရတာ ရှေးဘ၀ကံပါလို့ဗျ”
C	“ရှင်က talky တော့တော်တော်ကောင်းသာပဲ၊ဒီ talky နဲ့စော်ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်များ
B	“ကျွန်တော့်ကို online တတ် စော်တွေကို Q ပြီးအချိန်ဖြုန်းနေတဲ့ကောင်များမှတ်နေလား”
သူကအဲဒီလိုကောင်မလေးပါ၊ကျွန်တော်လည်းပထမတော့ Block လုပ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့
သူနဲ့ချက်ရတာ ခံစားချက်တစ်ခုခု ပေးနိုင်တာကတကြောင်း၊သူ့ဆီကနေတောင်းပန်စကားပြန်ကြားရမလားလို့
စောင့်နေမိတာကတကြောင်းနဲ့ Block မလုပ်လိုက်တာပါ။ခဏနေတော့သူပြန်ပြောလာပါတယ်။တောင်းပန်
စကားမဟုတ်ပင်မဲ့ လေသံတော့နည်းနည်းပျော့သွားပါတယ်။(လေသံပျော့သည်ဆိုရာ၌ သူ့အသံကိုကြားရ၍
ပြောခြင်းမဟုတ် သူရိုက်လိုက်သောစာကိုကြည့်၍ ခန့်မှန်းပြောခြင်းဖြစ်သည်)
C	“ရှင်online မှာစော်မရှိတာ တကယ်လား”
သူဘာဖြစ်မလဲသိချင်၍ ကျွန်တော်ဘာမှ ပြန်မပြောဖြစ်ပါ။
B	“မပျော်ပါဘူး…ကျွန်တော်ပြောတော့ရောခင်ဗျားက ယုံမှာလား”
C	“ရှင်လိမ်လည်းပြဿနာမရှိဘူး၊ရှင်နဲ့ကျွန်မ ကအပြင်တွေ့ရတာမှမဟုတ်တာ၊ယုံပေးရမှာပေါ့”
B	“ခင်ဗျားလေးယုံတာမယုံတာလည်းကျွန်တော့်အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး၊ကျွန်တော်ကတော့ အ
မှန်အတိုင်းပြောမှာပဲ၊ ကျွန်တော့်မှာ ရည်းစားမရှိဘူး”
C	“ဒါဆိုရင် အပြင်မှာရော”
C	“ဒါဆိုရင် online မှာစော်တစ်ယောက်လောက်မထားချင်ဘူးလား”
B	“အော်…ဒါကဒီလိုဗျ..အပြင်မှာသိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ၊စိတ်ဆင်းရဲ
မှု့တွေကို ဖွင့်ပြောရမှာ မမိုက်ဘူးဗျ၊ကိုယ့်ကိုအထင်သေးမှာစိုးရ၊သူ့မျက်နှာအခြေအနေကို
C	“ဒါဆိုရင် Online တခြားလူတွေသွားပြောလည်းရတာပဲမဟုတ်လား”
B	“ဘယ်တူမလဲဗျ…ကိုယ်ရဲ့အရင်းနှီးဆုံးလို့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့လူကိုပြောပြရတော့ ပို
ကျွန်တော် ဒီစကားကို တကယ်လေးလေးနက်နက်ပြောမိတာပါ။သူလည်းစိတ်ဝင်စားသွားပုံရတယ် သူ့ဘက်က
ဘာမှ တုန်ပြန်မလာဘူး။သူတုန့်ပြန်လာတော့လည်း ကျွန်တော်တောင်နည်းနည်းဖြုန်သွားမိပါတယ်။
C	“ဒါဆိုရင် ကျွန်မကို ချစ်တယ်လို့ပြော”
C	“အော်….ကျွန်မကို propose လုပ်လို့ပြောတာ၊ကျွန်မလည်း အဲဒီလိုလူတစ်ယောက်လိုမယ်လို့
ရှင်မထင်မိဘူးလား၊ဒါပေမဲ့ ရှင်နဲ့ကျွန်မကြားမှာ ကတိတစ်ခုတော့ထားရမယ်”
B	“ဟာဗျာ…ကျွန်တော်အဲလိုတွေ မခန့်မှန်းတတ်ပါဘူးဗျာ၊ခင်ဗျားသာပြောပါ ကျွန်တော်ပေးနိုင်
C	“ကောင်းပြီ (၁)ရှင်ကျွန်မကိုအပြင်မှာတွေ့ဖို့ဘယ်တော့မှမတောင်းဆိုရဘူး၊(၂)ဖုန်းနံပါတ်
B	“တူတယ် ကျွန်တော်လည်းအဲလိုလုပ်တာကို သဘောကျတယ်၊ဒါဆိုရင်နာမည်ပြော”
B	“Propose လုပ်ရင် နာမည်တပ်ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့”
C	“နာမည်အပြည့်အစုံက ပန်းချယ်ရီ၊သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ပန်းလို့ခေါ်တဲ့လူရှိသလို၊ချယ်ရီ
B	“ချယ်ရီလို့ပဲခေါ်ပါမယ်၊ကျွန်တော့်နာမည်ကတော့ စိုးထိုက်အောင်ပါ စိုးလို့ခေါ်လည်းရတယ်၊
ထိုက်လို့ခေါ်လည်းရတယ်၊အောင်လို့ခေါ်လည်းရတယ် ကြိုက်သလိုခေါ်ပါ၊ပြီတော့ အသက်
B	“ဟုတ်ဘူးလေ၊ ရန်ကုန်ဆိုရန်ကုန် တောင်ကြီးဆိုတောင်ကြီး အဲဒါလောက်ပဲပြောတာ”
C	“အဲလောက်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်၊ကျွန်မက SG မှာနေတာပါ၊အသက်က ၁၉ နှစ်ပါ”
B	SG ဆိုတာ စင်္ကာပူကိုပြောတာလား။
C	စစ်ကိုင်းကိုပြောတာ။ ဟိ… အခုတော့ရန်ကုန်မှာ သင်တန်းလာတတ်တာ။ရှင်ကရော…..
B	“ကျွန်တော်က ရန်ကုန်မှာနေပါတယ် ၂၁ နှစ်ပါ”
“ဒါဆို Propose လုပ်ပြီနော်”
C	“as u like”
B	“ချယ်ရီကိုကျွန်တော်အရမ်းချစ်တယ်၊ကျွန်တော့်ကိုပြန်ချစ်နိုင်မလား ချယ်ရီ”
B	“စကားပြောလာတဲ့တောက်လျှောက် ဒီတခွန်းပဲညင်သာတာပါသေးတယ်”
C	“ကြည့်၊ ရည်းစားဖြစ်တာဖြင့် စက္ကန့်ပိုင်းတောင်မကြာသေးဘူး စပြီးဆူပြီ”
ဒီလိုနဲ့ပဲ အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်Gtalkကနေ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့ ရည်းစားအသစ်တစ်ယောက်ကို
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ၊ ၅ရက်
ဒီနေ့ တစ်နှစ်ပြည့်ပါတယ်။ ဒါကိုသူသတိထားမိလား မထားမိလားမသိပေ့မဲ့၊ ကျွန်တော်အတွက်တော့ အမှတ်
တရပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ အင်တာနက်ဆိုင်ကို စောစော သွားခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့ တွေ့နေကျ အချိန်ထက် တစ်နာ
ရီလောက်စောပြီး သွားတာပါ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ဒီနေ့သူ့ဆီကနေ ဖုန်းနံပါတ်တောင်းဖို့ ရည်ရွယ်လာပါတယ်။
ဒါ အတော်ကို အရဲစွန့်ရမယ့် အလုပ်ပါ။ သူနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ ကြားမှာ ကတိတစ်ခုထားထားတယ်မဟုတ်လား။
အမှန်အတိုင်း အပြောရရင် ကျွန်တော်သူကိုချစ်မိနေပါပြီ။ စကားစကားပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြဆိုတဲ့
အတိုင်း သူ့အကြောင်းတော်တော်များများကို ကျွန်တော်သိခဲ့ရသလို၊ ကျွန်တော့်အကြောင်းတော်တော်များများ
ကိုလည်း သူသိနေပါပြီ။ သူက ကတိတစ်ခုကို တန်ဖိုးထားသူဆိုတာလည်း ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်သူ့အပေါ် ချစ်တဲ့ အချစ်တွေက ထိုကတိဆိုသည့် ဘောင်တစ်ခု၊ အဟန့်အတားတစ်ခုကို ဖောက်
cheery89@gamil.com ဆိုသည့် account လေး အစိမ်းရောင်မီးလင်းလာပါတယ်။ သူလည်း online ကို
B	ဟိတ်၊ ဒီနေ့စောတယ်နော်၊ ဘာဖြစ်လို့စောစောလာတာလဲ….
C	ချယ်ရီတစ်ယောက်တည်း စောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ ချယ်ရီ့ ထက်စောတဲ့လူတောင်ရှိသေး
B	ကိုက ဒီနေ့စောစောလာတာ အကြောင်းရှိတယ်။ ဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ ခန့်မှန်းကြည့်။
C	အလုပ်ပိတ်ရက်မို့လို့လား….ဒါမှမဟုတ်…ချယ်ရီ့ အပြင် အခြားစော်တစ်ယောက်နဲ့ချိန်းထားလို့
B	ဟာ………..ချယ်ရီကလည်း online မှာရော အပြင်မှာရော ရည်းစားဆိုလို့ ချယ်ရီတစ်ယောက်
C ဒါဆို ဘာလို့လည်းဆိုတာပြောပြ……….
တကယ်မသိဘူးဆိုရင်တော့ ကို စိတ်ဆိုးမိမှာ အမှန်ပဲ……….
C	စတာပါရှင် …… စိတ်ကြီးပဲ……….ဒီနေ့ ချယ်ရီတို့ online မှာ ရည်းစားဖြစ်တာ ၁နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့
လေ ….ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား……… ဒါကြောင့်ချယ်ရီက စောစောလာတာ……….
B	ဒီလိုကျတော့လည်း ချယ်ရီကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ………
တစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ချယ်ရီနဲ့ ကို အပြန်အလှန် လက်ဆောင်တစ်ခုစီ ပေးကြ
C	online ကနေပဲလား
B	ကို့ကို စိတ်မဆိုးရဘူးလို့ အရင်ကတိပေး……..
B	သေခြာနားထောင်နော်……..ကိုယ့်ကို ချယ်ရီ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေး ပေးပါလားကွာ…..
Online မှာပြောရတာ အားမရဘူး ….နောက်ပြီး………..ကိုယ် လေ
ချယ်ရီ့ဘက်က စက္ကန့်အတော်ကြာ ဘာမြှုပန်မပြောပါဘူး………ကျွန်တော်လည်း တော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှား
C	တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်က ကတိတစ်ခုကို ဖျက်ဖို့လုံလောက်တဲ့အချိန်လို့ ရှင်သတ်မှတ်ထားလား
တစ်နှစ်ဆိုတဲ့ အချိန်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အခွင့်အရေး ယူဖို့လုံလောက်တဲ့ အချိန်လို့
ရှင်သတ်မှတ်ထားတာလား……..ကျွန်မ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်……..ယောင်္ကျားတွေ အားလုံး
ကျွန်တော် တကိုယ်လုံးချွေးတွေရွဲနစ်နေပါပြီ…………သူ့ကိုဖြေရှင်းတုန့်ပြန်ဖို့ စကားလုံးတွေ ကို ကီးဘုတ်လက်
ကွက်မှာရော ဦးနှောက်ထဲမှာရော ဘယ်မှာမှ ရှာမတွေ့ပါဘူး……………….
C ကျမ ရှင်နဲ့ စကားဆက်မပြောချင်တော့ဘူး…………….ကံမကုန်သေးရင်တော့ ထပ်တွေ့ကြအုံး
သူ offline ဖြစ်သွားပါတယ်……………block လုပ်တာလား…….ထွက်သွားတာလားမသေခြာပေမဲ့ ကျွန်တော့်
နှလုံးသားကတော့ block လုပ်တာခံလိုက်ရပါပြီ………..
အိမ်အပြန်လမ်းမှာ မိုးဖွားလေးတွေကျနေပါတယ်……………“ကိုယ်အပေါ်မှာ အရင်းနှီးဆုံးလူ တစ်စိမ်းများကြား
မှာ ရှိရင် အရာရာပြည့်ဆုံမလား…….ကိုယ့်ကို တွေ့ဆုံခွင့်ပေးပါ……”
၀ိုင်ဝိုင်း သီချင်းသံတစ်ချို့ လမ်းထိမ်ရှိ လဖ္ဘက်ရည်ဆိုင်ထဲမှ ပြန်လွင့်လာပါသည်………………………….
October 2, 2009 at 9:52 am | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
မုယော စပါးနံ့သင်းပြီး အမြုပ်တစီစီ ထနေသော ညနေတစ်ခု၏ ရွာမလိုနဲ့ အုံ့ဆိုင်းနေသော ကောင်းကင်အောက်မှာ ဟောင်းနွမ်း
နေသော ခုံအိုလေးတစ်လုံး၊ ကျယ်ပြန့်သော မြစ်ပြင်ကျယ်၊ လှိုင်းကြပ်ခွပ်လေးများ၊ သံစဉ်တစ်ချို့နှင့် ပြန်ကျဲနေသော စိတ်အစဉ်
တို့ကို လိုက်လံသိမ်းစည်းနေသော ဂျစ်ကန်ကန်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကို မထိတထိပွတ်တိုက်သွားသော လေနုအေးလေးက
“ငါ့ရဲ့ ညနေတွေကို အသက်သွင်းလှည့်ပါ” လို့ တီးတိုးညည်းဆိုသွားလေရဲ့။
တကယ်တော့ ငါကိုယ်တိုင်တောင်မှ သေဆုံးနေတာကြာပါပြီကွာ။ ငါရဲ့ညနေတွေက ငါအလောင်းကောင်အတွက် မြေနေရာပေါ့။
အော်……….ကြုံလို့ပြောလိုက်အုံးမယ် ငါသေဆုံးသွားရင် ငါ့ကိုမြေမမြုပ်ပဲ ဒီတိုင်းထားလိုက်ပါ။ ငါ………….ခွေးအတွေ အတွက်
အလှူတစ်ခုလုပ်ခဲ့ချင်လို့။ ငါရှင်သန်နေသရွှေ့တော့ ငါ့အတ္တကို မွေးမြူနေအုံးမှာပဲ။ ငါ့ရဲ့သေဆုံးချင်းကို နောက်ဆုံးထွက်သက်
အထိ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေတာဟာ ငါ့အတ္တပဲပေါ့။ ငါနဲ့ တသက်လုံးတွဲလာတဲ့ အဖော် တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ်။
အဖော်ကောင်းလား၊ အဖော်ဆိုးလားတော့မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ သူဆီကနေ တစ်ခါတလေ ပုပ်အပ်အပ် အနံ့တော့ ရတတ်တယ်။
ကျွန်တော်သိသော ဘ၀ အစသည် တောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်၏။ စိမ်းလမ်းသော မြက်ခင်းပြင်နှင့်ပြီး၏။ ကျယ်ပြန့်သော ကောင်း
ကင်ပြင်ကို မော့ကြည့်နိုင်၏။ သင်းပျံသော ပန်းရနံ့တို့ကို ရှုရှိုက်နိုင်၏။ လတ်ဆတ်သော လေဖြင့် အဆုတ်ကို အားဖြည့်နိုင်၏။
ဆင်းရဲခြင်းကို အိပ်မက်မျှ မမက်ဘူး။
၁၀ နှစ်သားအရွယ် ကျွန်တော်သိသော ဘ၀သည် အိပ်ခန်းခပ်ကျင်းကျင်း၊ အချိန်မှန်လွင့်နေသော ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်
တစ်ခု၊ ရှုပ်ထွေးသော ကားများ၊ နှင့်ပြီး၏။ ရှုရှိုက်လိုက်သော လေတွင် CO2 တို့နှင့်ပြည့်နှက်နေ၏။ မီးခိုးတွေမွန်နေသော
လေပူများကို အဖော်ပြုမိ၏။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်လာသော အခြေအနေတွင် ဆင်းရဲခြင်းကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း
မြင်လာ၏။ ဆင်းရဲမှာကို ကြောက်သွား၏။ အတ္တဆိုသည့် သူငယ်ချင်းကို စတင်ပေါင်းသင်းမိသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ညနေခင်းကတော့ စတင် အသက်ဝင်စပြုလာပြီ……………. ကျွန်တော်ကတော့ ၁၀ နှစ်သားကလေးဘ၀ ကို မြေမြုပ်လိုက်ပြီ
ဖြစ်သည်။…………………………………………………………………………..ကျွန်တော့် အတ္တက ကျွန်တော်ကို မြေမြုပ်ဖို့ ကျိုးစား
September 9, 2009 at 6:04 am | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
သူငယ်ချင်းတို့သင်ဟာသင့်ချစ်သူအပေါ်ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဆိုတာမှန်းကြည့်ချင်လား။
ဥပမာ-နံပါတ် 1 မှာသင်က တိုကျိုကိုရွေးချယ်ခဲ့ရင် တိုကျိုရဲ့ ဘေးမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း မေးခွန်း နံပါတ်3ကိုသွားဖြေရမှာပါ၊ မေးခွန်းနံပါတ်2ကိုဖြေဖို့ မလိုပါဘူး။
1 ။ သွားချင်တဲ့နေရာတစ်ခုရွေးပါ။
ပေကျင်း – go to question 2
တိုကျို – go to question 3
ပဲရစ် – go to question4Continue Reading သင်ဘယ်လောက်ဆွဲဆောင်မှုရှိလဲ…
September 8, 2009 at 2:21 pm | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
ကျွန်တော်စိတ်ဓါတ် ကျနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်အားမရလို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်မလာတာ၊ မဖြစ်ချင် တာတွေပဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပါ
တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အရိုင်းအစိုင်းတစ်ယောက်လား ဆိုတာ ကိုယ့် ကိုယ် ကိုယ် သံသယ ဖြစ်မိတယ်။ မိဘစကားလည်း နားမထောင်၊ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်မယူနိုင်သေး
တာတွေကို တာဝန်ယူနိုင်တယ်ထင်ပြီး လုပ်မိတာတွေကို နောင်တမဟုတ်တောင်မှ ၀မ်းနည်းမိတာအမှန်ပဲ။ ကျွန်တော့်အတွက် ၀မ်းနည်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကြောင့်
ကျွန်တော်နဲ့ ရောပြီး အပူအပင်တွေခံစားနေရတဲ့ အခြား တစ်ယောက်အတွက်ပါ။ ကျွန်တော်ကြောင့် သူဝမ်းနည်းတာကို မလိုလားတာပါ။ Continue Reading ကိုယ်တိုင်လုပ်မှဖြစ်မှာပါ………..
September 2, 2009 at 7:07 am | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
သူ့ဖခင်က နိုင်ငံတကာ လှည့်လည်သွားလာနေတဲ့ သဘောင်္သားတစ်ဦးဖြစ်တယ်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖခင်နဲ့အတူ ဆိပ်ကမ်းမြို့တော်တော်များများကို သူရောက်ဖူးခဲ့တယ်။
တစ်နှစ်မှာ ဖခင်က သူ့ကိုခေါ်ပြီး Vincent van Gogh နေခဲ့ဖူးတဲ့ နေအိမ်ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်။ ဗင်ဂိုးသုံးခဲ့ဖူးတဲ့ သစ်သားကုတင်နဲ့ ထိပ်အက်နေတဲ့ဖိနပ်ကိုတွေ့တော့ ဖခင်ကို သူတအံ့တသြမေးခဲ့တယ်။
“ဖေဖေ.. ဗင်ဂိုးက သူကြွယ်တစ်ဦးမဟုတ်လား?”
“ဗင်ဂိုးက မိန်းမတောင်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဆင်းရဲသားတစ်ဦးဖြစ်တယ်” လို့ သူ့အမေးကို ဖခင်ကပြန်ဖြေခဲ့တယ်။
နောက်တစ်နှစ်မှာ ဖခင်နဲ့အတူ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကို သူရောက်လာခဲ့တယ်။ အန်ဒါဆင်ရဲ့ အမှတ်တရနေအိမ်ကို သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီး နားမလည်စွာနဲ့ ဖခင်ကိုသူမေးခဲ့ပြန်တယ်။
“ဖေဖေ.. အန်ဒါဆင်က နန်းတော်ထဲမှာနေတာ မဟုတ်လား”
“အန်ဒါဆင်က ဖိနပ်ချုပ်သမားတစ်ဦးရဲ့ သားဖြစ်တယ်။ သူ့ဘဝကို ဒီအိမ်ငယ်လေးထဲမှာပဲ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်” Continue Reading မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု…
August 29, 2009 at 8:24 am | Posted in Uncategorized | Leaveacomment
ဆိုခြင်းစကား ‘ဤဆယ်ပါး’ Continue Reading စကားကြီး ဆယ်မျိုး…